2001 – Year – Channel Myanmar
Millennium Mambo(2001) Millennium Mambo(2001) ===================IMDb Rating. = 7.1/10 Directed By Hou Hsiao-Hsienသိသလောက်တော့ နီယွန်ညရုပ်ရှင်တွေဟာ အရှေ့အာရှရုပ်ရှင်ပရိတ်သတ်တွေကြား ပြန်ခေတ်စားနေတာ သုံးလလောက်တော့ကြာပါပြီ။Edward Yangရဲ့Taipei Storyတို့ Tsai Ming Liangရဲ့ Rebels of the Neon Godတို့ အခု Hou Hsiao-Hsienရဲ့ Millennium Mamboတို့အစရှိသဖြင့်ပေါ့။Millennium Mamboဟာ ဘယ်လိုရုပ်ရှင်မျိုးလဲဆိုတာ ပြောတတ်သလိုပြောရရင်တော့ ဝေါင်ကာဝေးကားကို သရုပ်မှန်နဲ့ရိုက်ထားသလိုပါပဲ။ဒါက Themeဖြစ်တဲ့ နီယွန်ညများကနေ ဆင့်ပွားသွားလို့လို့တော့ ထင်တယ်။Houရဲ့ ကျန်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုတော့ သိပ်မသိပေမဲ့ Millennium Mamboမှာတော့ အရာရာတိုင်းဟာ သရုပ်မှန်ပါပဲ။ ဆန်းပြားလှပတဲ့ ဒိုင်ယာလော့ တွေလည်းမပါဘူး။ထူးခြားတဲ့ ဇာတ်၀င်ခန်း တွေလည်း မပါဘူး။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ နီယွန်ညထဲက ဘ၀တွေအကြောင်း ရိုက်ပြထားရုံပါပဲ။စတိုရှိခွန်ပြောဖူးတဲ့စကားထဲက အဓိကကျတဲ့ တစ်ချက်ကိုပဲ ထုတ်နုတ်ပြောရရင်။ခွန်ဟာ ပရိတ်သတ်ကို သူပြောချင်တာကို နှုတ်တိုက်သင်မပေးဘဲ သူပေးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်နာမည်ကိုအ‌ခြေပြုပြီး ...
The Fast and the Furious (2001) Fast and Furious 1 ဒွမ်တို့အဖွဲ့ဟာ မြို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံးသောခိုးမှုတွေမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ သံသယအရှိဆုံးသူတွေပါ...အချီကြီးမှချတတ်သလို ပိရိလွန်းပြီးလက်တွဲညီလွန်းတဲ့သူတို့အဖွဲ့ကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ဘယ်ကအစကောက်ပြီးလိုက်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်...အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ကားမောင်းကျွမ်းကျင်ပြီး ဂျလေဘီပုံပေါက်နေတဲ့ ဘရိုင်ယန်ကိုသူလျှိုအဖြစ်စေခိုင်းရင်း ဒွန်တို့အဖွဲ့ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ ဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်....File Size : (2.06GB) ,(0.99 GB) Quality : Blu-Ray 10805.1CH , 720p Running Time : 1hr 46min Format : Mp4 Genre :Action, Crime, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : 1080p BluRay x264-SPARKS Translated by Thura Zarni Aung Encoded by Phyo Pyae/Thanhtike Zaw
The Fast and the Furious (2001) Fast and Furious 1
My Boss, My Hero(2001) ဂန်ဒူဆစ် ဟာ တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ရှိပြီး လူမိုက်လောကမှာ အလားအလာကောင်းတဲ့ ဂန်းစတားတစ်ယောက်ပါသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုကြောင့် ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ကြီးက သဘောကျပြီး ဆိုးလ်မြို့ရဲ့ အချက်အချာအကျဆုံးနေရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြောင်ဒေါင်း ကို အုပ်ချုပ်စေဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမယ့် အထက်တန်းတောင် မအောင်တဲ့ သူ့ကိုအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုကို အုပ်ချုပ်ဖို့ တာ၀န်ပေးတာ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ကျန်တဲ့ လူမိုက်တွေက ဝိုင်းကန့်ကွက်ကြတဲ့အခါဂန်ဒူဆစ် တစ်ယောက် ကြီးကောင်ကြီးမား လူလတ်ပိုင်းအရွယ်ကျမှ ကျောင်းပြန်တက်ဖို့ လုပ်ရပါတော့တယ် သူ့ရဲ့တပည့်ကျော်နှစ်ယောက်ကြောင့် ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတစ်ခုမှာ ၀င်ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် ဂန်းစတားဘ၀ကနေကျောင်းသားဖြစ်သွားတဲ့ လူမိုက်ကြီး ကျောင်းမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကိုဟာသလေးတွေနဲ့ ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါဒီကားအဆက် My Boss,My Teacher (2006) ကို https://channelmyanmar.org/?s=my+boss+my+teacher ဒီမှာကြည့်ပါ။ Translated by : Aung Tay ZaEncoded by: YKFile Size ...
A.I. Artificial Intelligence(2001) A.I. Artificial Intelligence(2001)အညွှန်း ***********************************(နင်းကန်ကောင်းတဲ့ကားမို့ HEVC 1080p 5.1, 720pတို့ဖြင့်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးထားပါသည်...) IMDb....7.1,,,,Rotten....73 ဒါရိုက်တာ Steven Spielberg ဆိုတာနဲ့ ခင်ဗျားတို့ ဒီကားကိုနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားသွားမယ်ထင်တယ်....ဒီကားရိုက်တော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း အော်စကာ ဆန်ကာတင်အဆင့်ပါခဲ့တယ်...ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ရုပ်ရှင်ကြည့်သက်ရင့်လာတာနဲ့အမျှ ဇာတ်ကားကြည့်တဲ့နေရာမှာ အစပိုင်းနည်းနည်းကြည့်ပြီးတာနဲ့တစ်ကားလုံးမဟုတ်တောင် ရှေ့ဆက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဟာတစ်ချို့ကိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်...ဒါပေမယ့် ဒီကားကိုကြည့်မိရင် ခင်ဗျားတို့ ထင်ထားတာတခြားစီဖြစ်သွားနိုင်တယ်..ဘာလို့ဆို ၁၀မိနစ်လောက်စထားတဲ့ plotတစ်ခုဟာနောက်တစ်နေရာရောက်တော့ ခင်ဗျားတို့လုံးဝထင်မထားတဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုကိုချိုးကွေ့လိုက်တယ်.....အချိုးအကွေ့ပေါင်းများစွာနဲ့ဒီကားကိုတည်ဆောက်ထားတယ်...ဒါကြောင့်လည်း Steven Spielberg ဟေ့ဆိုပြီးနာမည်ကြီးတာနေမယ်...ပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲ စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့ရေးသားမှုပိုင်းညံလေသလားမသိ ဒီကားကိုအညွှန်းဘယ်လိုရေးရမှန်းမသိဘူး...ကောင်းလားလို့မေးရင်တော့ ပြန်ဖြေလို့ရတယ်....ကျွန်တော်တို့တွေလေထဲကအောက်ဆီဂျင်ကိုရှူကြတယ်...တစ်ယောက်ယောက်က လေဘယ်မှာလဲပြဆိုရင် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြလို့မရဘူး...ဒီတော့လေမရှိဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူး လေဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်...ဒီလိုပဲ ဒီကားရဲ့ကောင်းကွက်ကဘာလဲ ဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းကကောင်းတာလဲ music ပိုင်းလား plotပိုင်းလား ..သရုပ်ဆောင်ပိုင်းလား နည်းပညာပိုင်းလား..ဆိုတော့ လေရှိလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေသလိုပြန်တုန့်ပြန်ရမယ်ထင်တယ်....အယ် ဒေါင်းမဲ့သူတွေအတွက် ဆင်ခြင်လို့ရအောင်ပြောလို့ရတာတော့တော့ရှိတယ် ..အမိုက်စားအက်ရှင်ခန်းတွေ ...ဘီကီနီဝတ်အလှအပတွေ....၁၅၀၀ဖွဲ့ romantic ဆန်အကွက်တွေ မပါဘူး...File Size…(2.9GB) and (1.4GB) Quality…HEVC 1080p 5.1, Blu-Ray 720p Format…mkv Duration…02:26:00 Subtitle…Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder…..Phyo Pyae Translated by Honest ...
Amélie (2001) Amélie(2001)========================IMDb Rating- 8.3/10 Rotten Tomatoes- 89% "အဲ့ကောင်မလေးက သူများရဲ့ ကမောက်ကမ ဘ၀တွေကို ကူပြင်ပေးဖို့ ကြိုးစားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လေ" "ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်ကျတော့ရော မပြင်ဘူးလား? ကိုယ်ရဲ့ ကမောက်ကမဖြစ်နေတဲ့ ဘ၀ကို မပြင်ဘူးလား? ကိုယ်မှ မပြင်ရင် ဘယ်သူက လာပြီး ကူပြင်ပေးမှာလဲ? " -Amélie(2001) ကျောင်းတက်ဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့Amélie Poulainကို သူ့အဖေက နှလုံးရောဂါရှိတယ်လို့ အမှတ်မှားပြီး ကျောင်းမထားပါဘူးဒီတော့ သူ့အမေက သူ့ကို အိမ်မှာပဲ ထားပြီး ကိုယ်တိုင် စာသင်ပေးပါတယ်အဲ့အချိန်ကစပြီး Amélieက အထီးကျန်တဲ့လူတစ်‌ယောက်ဖြစ်လာပြီး သူ့အထီးကျန်မှု‌တွေကို စိတ်ကူးယဉ်မှု‌တွေနဲ့ပဲ အဖော်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် အရွယ်ရောက် အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိစ္စတိုင်းကို သူမတူတဲ့အမြင်နဲ့ ရှုမြင်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်မင်းသမီး ဒိုင်ယာနာဆုံးတဲ့ ၁၉၉၇ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၃၁ရက်မှာ သူ့ကံကြမ္မာပြောင်းဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့နေမှာ Amélieက သူ့တိုက်ခန်းထဲကနေ ဘူးတစ်ဘူးရှာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဘူးက တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လေးဆယ်က သူ့တိုက်ခန်းမှာနေခဲ့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပစ္စည်းပါအဲ့ဘူးလည်း တွေ့တော့ Amélieက ...
Sweet November (2001) Sweet November (2001)===================IMDb Rating - 6.7/10#Unicodeဒီတစ်ခေါက်မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးကတော့ နိုဝင်ဘာလရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း Drama လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးလေးတွေကို ချစ်တဲ့သူ၊ မိသားစုတွေနဲ့ အဆင်မပြေပြီး တစ်ယောက်ထဲဘဝကို ရူးရူးမိုက်မိုက်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ကင်ဆာရောဂါသည်မလေး ဆာရာ....ဘဝကို ပြေးလမ်းတစ်ခုလို သဘောထားပြီး ဘဝကို အလုပ်ထဲမှာပဲ အချိန်ပြည့်နစ်မြှုပ်ထားတဲ့ နယ်လ်ဆင်......သူ့ဘဝထဲ ဆာရာဆိုတဲ့ ရူးမိုက်မိုက်ကောင်မလေးဝင်ရောက်လာချိန်မှာတော့ ဘဝရဲ့အဓိပ္ပါယ်၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဆာရာကြောင့် သိရှိခဲ့ရတယ်။ နယ်လ်ဆင်တစ်ယောက် အချစ်ကိုခံစားမိချိန် ဆာရာ့ကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ နယ်လ်ဆင့်အချစ်ကို ဆာရာတစ်ယောက် လက်ခံပါ့မလား။ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။Sweet November ဝတ္ထုကို 1968 ခုနှစ်က ဇာတ်ကားပြန်လည်ရိုက်ကူးထားပြီး Sweet November နာမည်နဲ့မင်းသားက Anthony Newley နဲ့ မင်းသမီးက Sandy Dennis တို့ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2001 ခုနှစ်မှာတော့ ထိုဇာတ်ကားကို Sweet November ...
Pearl Harbor (2001) Pearl Harbor 2001 ==================== ၁၉၄၁ ခုနှစ်က အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ပုလဲဆိပ်ကမ်းကိုဂျပန်တွေလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ်မူတည်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်မှန်ဆိုပေမယ့်အဓိကဇာတ်ကောင်တွေကတော့စိတ်ကူးယဥ်သာဖြစ်ပြီးအချစ်ဇာတ်လမ်းအပိုင်းပါထည့် သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရေ့ဖ်နဲ့ဒန်နီဟာ ငယ်စဥ်ကတည်းကအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီး အမေရိကန်လေတပ်ပိုင်းလော့တွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ ရေ့ဖ်ဟာ အက်ဗလင်း ဆိုတဲ့ စစ်သူနာပြုနဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီးနောက် ဥရောပမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွက် ဗြိတိန်ဘက်မှဝင်တိုက်ပေးဖို့အခွင့်အရေးကိုရရှိသောအခါလက်လွှတ်မခံနိုင်၍ ချစ်သူအက်ဗလင်းကိုနှုတ်ဆက်ကာ အင်္ဂလန်သို့ထွက်သွားပါတော့တယ်။ ရေ့ဖ်တစ်ယောက် အင်္ဂလန်မှာဂျာမန်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာ အင်အားနည်းနေတဲ့ပုလဲဆိပ်ကမ်းကို ထင်မှတ်မထားတဲ့အန္တရာယ်ကြီးကျရောက်လာပါတော့တယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာဟာ Transformers ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Michael Bay ဖြစ်တာမို့သူ့ရဲ့အက်ရှင်ပေါက်ကွဲမှုလက်ရာတွေကိုဇာတ်လမ်းတစ်လျှောက် အားရပါးရမြင်တွေ့ရမှာပါ။ အက်ရှင်ကားကြမ်းကြမ်းကြိုက်သူတွေ၊ စစ်ဇာတ်လမ်းကြိုက်သူတွေ၊ ဒါရိုက်တာ Michael Bay ရဲ့လက်ရာတွေကြိုက်သူတွေအဖို့တော့ ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Translated by : Pyi T Nyein Encoded by : YK Quality : 1080p blueray and 720p
The Land Before Time VIII: The Big Freeze THE LAND BEFORE TIME REVIEW Channel Myanmar ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က စတင်ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ The Land Before Time ဆိုတဲ့ ကာတွန်းဇာတ်လမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်းမပြောခင် သိစေချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါ တယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးသူတွေအကြောင်းပါ …. Producer တွေကတော့ ဂျော့်ဂျ်လူးကပ်စ် နဲ့ စတီဗင်စပီးဘာ့ဂ် တို့ ဖြစ်ကြပြီး ဒါရိုက်တာကတော့ ဒွန်ဘလုသ် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လို ရုပ်ရှင်အကျော်အမော်ကြီး ၃ ယောက်ဆုံထားတဲ့ ဒီလိုစီးရီးမျိုးဟာ Movie Industry မှာ ဒီတစ်ခုတည်းသာ ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ် ကမ္ဘာဦးအစက ဒိုင်နိုဆောလေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်မှု ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတွေ အကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး လစ်တဲဖု စပိုက်ခ် ဆယ်ရာ နဲ့ ပီထရီဆိုတဲ့ ဒိုင်နိုဆော သူငယ်ချင်းလေးတစ်စုရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ရိုက်ပြထားတာပါ။ ကာတွန်းကားဆိုပေမယ့် …… ကမ္ဘာဦးတုန်းက ...
Bungee Jumping of Their Own (2001) မင်းသားကြီး လီဗြောင်ဟွန်းရဲ့ ၂၁ ရာစု ခေတ်ဦးက BL ဇာတ်ကားပါ။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာက "အမျှင်" ဆိုပြီး ပြန်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် "Dew" ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ပြန်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ကားတွေကတော့ မြန်မာမှု၊ ထိုင်းမှု ပြုတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မူရင်းကားရဲ့အရသာနဲ့ မတူပါဘူး။ ဒါကတော့ "Dew" ဇာတ်ကားရဲ့လင့်ခ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ https://channelmyanmar.org/dew/ ဒီကားမှာတော့ ၁၉၈၀ ဝန်းကျင်က စထားပါတယ်။ ဆောအင်ဝူးဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ လီထယ်ဟီး ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို မြင်မြင်ချင်းပဲ ချစ်မိတယ် ဆိုတဲ့ အချစ်မျိုးနဲ့ ချစ်ခဲ့ပြီး တစ်သက်တာ ပေါင်းဖက်ဖို့အထိ ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကံကြမ္မာရဲ့လှည့်စားမှုတွေကြောင့် မမျှော်လင့်ဘဲ ထယ်ဟီးတစ်ယောက် ဆုံးပါးခဲ့ရပါတယ်။ ၁၇ နှစ် အကြာမှာတော့ ဆောအင်ဝူးဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ အိမ်ထောင်ရက်သားကျပြီး ကလေးတစ်ယောက်အဖေ ကျောင်းဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ခပ်ဆိုးဆိုးကျောင်းသားတွေရဲ့အတန်းပိုင်ဖြစ်လာတဲ့ ဆောအင်ဝူးဟာ ကျောင်းသား-ဆရာ ဆက်ဆံရေး အရမ်းကို အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ ဆောအင်ဝူးတစ်ယောက် အင်ဟွန်ဘင် ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အပေါ်ကို ကြွေမိသွားပါတော့တယ်။ ဒါတွေက ဘာကြောင့်များပါလဲ????? ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ပြီး အဖြေရှာကြည့်ပါစို့ဗျာ။ ဇာတ်ဆောင် ...
Princess of Thieves (2001) Princess of Thieves (2001)===================IMDb Rating - 5.7/10#Unicodeဒီတစ်ခေါက်တော့ ပုံပြင်တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒါရိုက်တာ Peter Hewittရိုက်ကူးထားတဲ့ Princess of Thieves နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ဒီဇာတ်ကားက ရော်ဘင်ဟုထ် နဲ့ သူ့သမီးဇာတ်ကြောင်းလေးကို ရိုက်ထားတာပါ။ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ဘုရင်သေဆုံးသွားတော့ မြို့စားမင်းရဲ့ အာဏာတပ်မက်မှု့တွေကြောင့် နောက်နန်းတက်မဲ့ဘုရင့်သားတော် တစ်ပါးကို ကြေးစားငှါးရမ်းပြီး လိုက်လံ သတ်ဖြတ်ခိုင်းပါတော့တယ်။ တချိန်ထဲမှာပဲ ဘုရင့်အပေါ် သစ္စာစောင့်သိတဲ့ ပြည်သူတွေနှင့် ပြည်သူ့အချစ်တော် ရော်ဘင်ဟုထ်ရယ် သူ့သမီးလေးရယ်ကမင်းသားလေးကို မြို့စားမင်းရဲ့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု လက်ထဲကနေ ဘယ်လိုကယ်တင်ကြမလဲ.... နောက်ပြီးရော်ဘင်ဟုထ်ရဲ့ သမီးနဲ့ မင်းသားလေးရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေကို ဒီကားထဲမှာ ကြည့်ရှုရမှာပါ.........(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ Parris ပဲဖြစ်ပါတယ်။)#Zawgyiဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ ပုံျပင္ေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ ဒါ႐ိုက္တာ Peter Hewitt႐ိုက္ကူးထားတဲ့ Princess of Thieves ...
Spirited Away (2001) နောက် ထပ် Studio Ghibli ရဲ့ artwork တစ်ခုနဲ ့မိတ်ဆက် ပေးချင် ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ မိတ်ဆက် တယ် ဆိုတာထက် ပြန်ပြီး remind လုပ်တာ ဆိုရင် ပိုမှန် ပါလိမ့်မယ်။ Spirited Away ပါ။ Otaku တော်တော်များများ ကြည့်ဖူး ကြလိမ့်မယ် လို့ ထင်ပေမယ့် ကောင်းလွန်း၊ သဘောကျလွန်း တာကြောင့် မရေးပဲ မနေနိုင်လို့ ရေးလိုက် ရပါတယ်။ ၁၀နှစ်သမီးလေး Chihiro ဟာ သူမရဲ့ မိဘနှစ်ပါး နဲ့အတူ တစ်ခြား မြို့တစ်မြို့ကို အိမ်ပြောင်းဖို့ခရီးထွက် လာပါတယ်။ တောလမ်း ခရီး တစ်နေရာ မှာ လိုဏ်ခေါင်း ကြီး တစ်ခုကို တွေ့တော့ Chihiro ရဲ့မိဘတွေ က ဝင်ကြည့် ပါတယ်။ လိုဏ်ဂူထဲ ကို ဝင်မကြည့် ချင်ပေမဲ့လည်း ကားပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်း နေဖို့ ကြောက်တဲ့ Chihiro ကလည်း မိဘတွေနဲ့အတူ လိုက်လာ ပါတယ်။ လိုဏ်ခေါင်းရဲ့ တစ်ဖက်ခြမ်း မှာတော့ ပျက်စီးနေပြီ ဖြစ်တဲ့ theme ...
Training Day(2001) Training Day(2001) IMDb....7.7,,,,Rotten....77% ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကားတော်တော်များများကြည့်ကြတယ်..တစ်ချို့ကားတွေကြတော့ သရုပ်ဆောင်ကြောင့်ကို တမင်ကြည့်ကြတာ... သူတို့ပါရင် အဲ့ဒီကားက တနည်းမဟုတ်တစ်နည်းကောင်းကိုကောင်းနေတတ်တာ....ဇာတ်လမ်းညံနေရင်တောင် သူတို့အရှိန်အဝါကြောင့် ကြည့်ကောင်းနေတတ်တာမျိုး....ဇာတ်လမ်းကောင်းနေရင်တော့ ပြောဖွယ်ရာမလိုတော့ပေ...ဒီလို သရုပ်ဆောင်ကြီးတွေထဲမှာ ဒန်ဇယ်ဝါရှင်တန်ဟာ ထိပ်ဆုံးစာရင်းထဲမှာရှိနေမယ်ထင်ပါတယ်....သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့The Equalizer ,Philadelphia ,Courage Under Fire ,Man on Fire စသည်ဖြင့် နာမည်ကြီးကားများစွာကို သိရှိကြမယ်ထင်ပါတယ်....ဒီ Training Day(2001) ဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ဒန်ဇယ်ကြီးက မြင်တွေ့နေကျပုံမျိုးမဟုတ်တဲ့ စရိုက်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားတယ်...ဒီဇာတ်ရုပ်က ပီပြင်လွန်းလို့ အော်စကာဆုတောင်ရရှိသွားပါတယ်....ဒီဇာတ်ကားဟာ ဆုပေါင်း (၁၆)ဆုရရှိခဲ့သလို အခြားဆုပေါင်း(၂၃)ဆုအတွက်လည်း ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်...ဒန်ဇယ်ကားဆိုတာနဲ့ ဇာတ်ညွှန်းတွေထွေထွေထူးထူးမပြောတော့ဘူး......သူက အကျင့်ပျက်ရဲတစ်ယောက်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားတယ်...တစ်ခုတော့ သတိပေးပါရစေ...ခင်ဗျားတို့ဇာတ်ကားကြည့်နေတုန်း အနားမှာ ကောက်ပေါက်လို့ရမယ့် ဟာမျိုးတွေ တုတ်တွေမထားပါနဲ့ ..ဘာလို့ဆိုဇာတ်ကားကြည့်နေရင် သူသရုပ်ဆောင်တာပီပြင်လွန်းတော့ နင်းကန်စိတ်တွေတိုပြီး TV ကြီးကို ပစ်ပေါက်မိမယ်စိုးလို့ပါ.... File Size : (950 MB) and (358 MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…02:02:00 Genre : Crime, Drama, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard ...
You Shoot, I Shoot ( 2001 ) Zawgyi*******ဒီတစ္ခါေတာ့ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေဟာင္ေကာင္ဟာသအက္ရွင္ကားေလးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ2001 က ထြက္ရွိထားၿပီး IMDb 7.4 အထိရရွိထားတဲ႔ဇာတ္ကားေလးပါဘတ္ဆိုတဲ့ေၾကးစားလူသတ္သမားတစ္ေယာက္ဟာအရင္လိုစီးပြားေရးမေကာင္းေတာ့ပါဘူးတဲ့ အေျခအေနအရပါတနာရွာေတာ့ ခြၽမ္ဆိုတဲ့ နယူးေယာက္႐ုပ္ရွင္ပညာဘြဲ႕ရဒါ႐ိုက္တာနဲ႔ေတြ႕သြားပါတယ္သူဟာလဲအေျခအေနမေကာင္းလို႔ေဆးေျခာက္ေရာင္းသူပါေၾကးစားႀကီးဘတ္နဲ႔ NYU ေက်ာင္းထြက္ခြၽမ္တို႔ ေစ်းကြက္ကိုအဖက္ဆယ္ဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ၾကသလဲဆိုတာဇာတ္ကားေလးကိုပဲၾကည့္ၿပီးအေျဖရွာလိုက္ၾကေတာ့ေနာ္ Unicode*******ဒီတစ်ခါတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဟောင်ကောင်ဟာသအက်ရှင်ကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ2001 က ထွက်ရှိထားပြီး IMDb 7.4 အထိရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါဘတ်ဆိုတဲ့ကြေးစားလူသတ်သမားတစ်ယောက်ဟာအရင်လိုစီးပွားရေးမကောင်းတော့ပါဘူးတဲ့ အခြေအနေအရပါတနာရှာတော့ ချွမ်ဆိုတဲ့ နယူးယောက်ရုပ်ရှင်ပညာဘွဲ့ရဒါရိုက်တာနဲ့တွေ့သွားပါတယ်သူဟာလဲအခြေအနေမကောင်းလို့ဆေးခြောက်ရောင်းသူပါကြေးစားကြီးဘတ်နဲ့ NYU ကျောင်းထွက်ချွမ်တို့ ဈေးကွက်ကိုအဖက်ဆယ်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲဆိုတာဇာတ်ကားလေးကိုပဲကြည့်ပြီးအဖြေရှာလိုက်ကြတော့နော် Translated & Review By Nu MonEncoded By LK
You Shoot, I Shoot ( 2001 )
No Man’s Land(2001) No Man's Land(2001)IMDb....8.0,,,,,,Rotten.....93%ေဘာစနီးယန္းနဲ႔ ဆားဘီးယန္းတို႔ စစ္ပြဲျဖစ္ေနခ်ိန္ ေရွ႕တန္းကို တပ္ကူဖို႔လာခဲ့တဲ့ ေဘာ့စနီးယားေဆးတပ္သားအဖြဲ႕ဟာ ညဖက္ၾကီးထြက္လာခဲ့တယ္.... ညကလည္းေမွာင္ ျမဴနွင္းေတြကလည္း ေရွ႕တျပကို မျမင္ရေလာက္ေအာင္ထူထပ္တာမို႔ ခရီးဆက္မထြက္ဘဲ အဆင္ေျပတဲ့ေနရာတစ္ခုကုိေရြးၿပီး ယာယီနားဖုိ႕ႀကဳိးစားၾကတယ္... မနက္မိုးလင္းလို႔ ေနေရာင္ထြက္လာခ်ိန္ သူတို႔ေဘးဘီဝဲယာကို စူးစမ္းၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ သူတို႔ေရာက္ေနတာ တစ္ဘက္ရန္သူျဖစ္တဲ့ ဆားဘီးယန္းေရွ႕တန္းတပ္ဖြဲ႕ေရွ႕တည့္တည့္ဆီကုိ ေရာက္ေနတာသိလုိက္ရခ်ိန္မွာေတာ့ သူတုိ႕ေနာက္က်သြားပါၿပီ..... ဆားဘီးယန္းေရွ႕တန္းတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕အႀကဳိက္ပါပဲ..ပစ္ကြင္းျမင္ကြင္းရွင္းသလုိ အေပၚစီးကေန အတြဲလုိက္ဆြဲတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ေဘာစနီးယန္းအဖြဲ႕ က်ည္ဆံဖ်ားမွာ အသက္ေတြတျဖဳတ္ျဖဳတ္ေၾကြကုန္တယ္... ဒီအထဲကမွာ စီကီတစ္ေယာက္ကေတာ့ ကံေကာင္းရွာတယ္ေျပာရမလားပဲ ... နီးစပ္ရာကတုတ္က်င္းထဲ ေျပးပုန္းႏုိင္ခဲ့တယ္..က်န္တဲ့သူေတြေတာ့အကုန္ေသဆုံးသြားတယ္... ဒီေနာက္မွာေတာ့ ေဘာ့စနီးယားတပ္သားစီကီတစ္ေယာက္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားႏုိင္မလား... ဆားဘီးယန္းေတြရဲ႕ ကင္းေထာက္အဖြဲ႕ရန္ကေန ဘယ္လုိရုန္းကန္မလဲ... သူ႕ဆီကုိေရာ ဘယ္လုိလူမ်ဳိ်းေတြေရာက္လာမလဲ... ဒီကားက ၁၉၉၃ခုႏွစ္ ေဘာ့စနီးယားစစ္ပြဲကာလႀကီးကုိအေျခခံရုိက္ကူးထားတာပါ... စစ္ပြဲဟာ အက်အဆုံးေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္မႈေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့ေပမယ့္ သမုိင္းမွာေတာ့ ရိုးတုိးရိပ္တိတ္သာရွိခဲ့တယ္...ဒီဇာတ္ကားဟာ ေဘာ့စနီးယား ဒါရိုက္တာနဲ႔စာေရးသူ Danis Tanovic ရဲ႕ ပထမဆံုးဖန္တီးမႈျဖစ္တယ္။ ပထမဆံုးလို႔မဆိုသာေအာင္ဘဲ ဇာတ္ကားဟာ လွပတယ္။ အျပစ္ဆိုႏိုင္ဖြယ္ရာမရွိဘူး။ ေပးခ်င္တဲ့ Message ေတြကလည္းတကယ့္ကုိေကာင္းလွတယ္..အစမွအဆုံးထိဆြဲေခၚသြားတယ္... ဒါ့ေၾကာင့္လည္းဆုေပါင္းမ်ားစြာရရွိထားတယ္...ရရွိတဲ့ဆုေတြကေတာ့ Best Foreign Language Film, 2001 74th Academy Awards Best Foreign Language Film, ...